မေလ ၂၆ရက်ကစတဲ့ ပါတီညီလာခံမှာတော့ လက်ရှိနိုင်ငံရေး အခင်းအကျင်း သုံးသပ်ချက် ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ရန်ကုန်ကနေ ပေးပို့တဲ့ သတင်းကို ဒေါ်ခင်မျိုးသက်က ပြောပြပေးမှာပါ။
တိုင်းရင်းသားပါတီတွေထဲမှာ အင်အားအကြီးဆုံးပါတီတခုလို့ဆိုနိုင်တဲ့ ရှမ်းတိုင်းရင်းသား များဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ညီလာခံကို မေလ ၂၆-၂၇ နှစ်ရက်ကျင်းပသွားဖို့ ပြင်ဆင်ထားတာပါ။ စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းထားတဲ့ လက်ရှိ မြန်မာ့နိုင်ငံရေး အခင်းအကျင်းပေါ်မူ တည်ပြီး ပါတီမူဝါဒ ပြောင်းလဲဖို့မရှိဘူးလို့ ပါတီရဲ့ တွဲဖက်အထွေထွေအတွင်းရေးမှုး ၁ စိုင်းကျော်ညွှန့်က ဗွီအိုအေကိုပြော ပါတယ်။
" လက်ရှိနိုင်ငံရေး အခင်းအကျင်းနဲ့ ပတ်သတ်ရင်တော့ ကျနော်တို့က လက်ရှိနိုင်ငံရေး အခင်းအကျင်းမှ ရယ်မဟုတ်ပါဘူး။ ကျနော်တို့ပါတီက ဘယ်အခန်းကဏ္ဍမှာ ဘယ်လိုရပ်တည်မလဲဆိုတာ ဘယ်လိုမူဝါဒရှိတယ်ဆိုတာ ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ရေးသားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုတော့ကျနော်တို့ပြောခဲ့တဲ့ မူဝါဒ အခြေခံတဲ့ပါတီဖြစ်အောင် ကျနော်တို့ကြိူးစားနေတာဖြစ်တယ်။ အဲဒီတိုင်းဘဲရပ်တည်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့က ခေါင်းဆောင်တယောက်က တမျိုးပြော နောက်တယောက်ကတမျိုးပြော ဆိုတာမျိုး ကျနော်တို့ပါတီမှာမရှိပါဘူး။ ကျနော်တို့မြင်ချင်တဲ့ ဒီနိုင်ငံပုံစံ mission ပေါ့ ။ ဒီတိုင်းပြည်ကို ဘယ်လိုတည်ဆောက်မယ်ဆိုတာ ကျနော်တို့ ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ပါတီမူဝါဒ လမ်းစဉ်မှာ ရေးထားပြီးသား ဖြစ်ပါတယ်။ အပြောင်းအလဲဖြစ်တာ ဒီနိုင်ငံရဲ့ အခင်းအကျင်းပြောင်းတာဖြစ်တယ်။ ဟိုတုန်းကလည်းဒီတိုင်းဘဲ ခုလဲဒီတိုင်းဘဲဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်မယ်"
စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းထားတဲ့ လက်ရှိ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးပိုင်းမှာ တည်ဆဲပါတီတွေမှာ ပါတီလှုပ်ရှား မှုတွေအတွက် ချုပ်ချယ်ကန့်သတ်ခံနေရတာတွေ ရှိနေသလို၊ စစ်ကောင်စီခန့် UEC ဘက်ကလည်း မလိုလားအပ်တာတွေ မဖြစ်ရအောင်ဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်နဲ့ ပါတီတွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကို ကန့်သတ်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားနေတယ်လို့ ပါတီ တချို့က ထောက်ပြတာတွေရှိနေပါတယ်။ ဒီလိုအခြေအနေကြားမှာပဲ SNLD ပါတီညီလာခံကို လုပ်ခဲ့ကြတာပါ။
လက်ရှိ မြန်မာ့နိုင်ငံရေး အခင်းအကျင်းမှာ စစ်တပ်ဘက်က လာမယ့်နှစ် ရွေးကောက်ပွဲ ပြန်လည်ကျင်းပပေးဖို့ ပြင်ဆင်နေတာတွေရှိနေပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာ အနိုင်ရခဲ့တဲ့ NLD အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့ ပါတီခေါင်းဆောင် အားလုံးနီးပါး ဖမ်းဆီးခံနေရတဲ့အချိန်မှာ၊ ပါတီတချို့က ဒီရွေးကောက်ပွဲကို လက်ခံပါဝင် သဘောရှိနေပါတယ်။ NLD ပါတီနဲ့ မဟာမိတ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ SNLD ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့ လာမယ့် ရွေးကောက်ပွဲ ဘယ်လိုသဘောထားမလဲဆိုတာကို အများစုစိတ်ဝင်စားပါတယ်။ စိုင်းကျော်ညွန့်က အခုလို တုံပြန်ပါတယ်။
" ရွေးကောက်ပွဲကိစ္စကတော့ CEC တွဘက်က သဘောထားတခုရှိတယ် ၂၀၂၂ ကုန်ထိ ရွေးကောက်ပွဲအကြောင်းကိုမဆွေးနွေးပါဘူး။ အဲဒါကပြောင်းစရာမရှိသေးပါဘူး "
ပါတီ စာရင်းများ အစစ်ဆေးခံဖို့ စစ်ကောင်စီခန့် ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် (UEC)က ပါတီတွေကို ညွှန်ကြားတာခဲ့တာမှာ လက်မခဲ့တဲ့ ပါတီတွေထဲမှာ SNLD ပါတီပါဝင်ပါတယ်။ လက်ရှိမှာ UEC ဘက်က SNLD ဘက်က အစစ်ဆေးခံဖို့ ရက်သတ်မှတ်ချက်ကို ဇွန်လကုန်ထိ တိုးမြင့်ပေး ထားပေမယ့် ပါတီ ရပ်တည်ချက်က အရင်အတိုင်းမပြောင်းမလဲ ရှိတယ်လို့ စိုင်းကျော်ညွှန့်ကပြောပါတယ်။
" ဒီညီလာခံမှာဆွေးနွေးဖြစ်မယ်မထင်ဘူး။. ဘာလို့ဆို UEC ကကျနော်တို့ကိုစာတစောင်ပို့ထားတာရှိတယ်။ စစ်ဆေးမယ့်ရက်နောက်ဆုံးရက်ကို ဇွန် ၃၀ ထိပေးထားတယ်ဆိုတာပို့ထားပါတယ်။ အားလုံးလဲသိပြီးသား ကျနော်တို့ကစစ်ဆေးမခံတာမဟုတ်ဘူးစစ်ချင်ရင်ပါတီဌာနချူပ်ရုံး ရန်ကုန်ကိုးမိုင်မှာရှိတယ် အဲကိုလာခဲ့လိုက်ပါ။ အဲဒါကလက်ရှိထိအပြောင်းအလဲမရှိဘူး ညီလာခံမှာလည်းအကျယ်တဝင့်ဆွေးနွေးဖြစ် မှာမဟုတ်ပါဘူး"
၂ရက်တာကျင်းပမယ့် ပါတီညီလာခံ ပထမနေ့မှာ ပါတီ CEC တွေသုံးသပ်တင်ပြထားတဲ့ လက်ရှိနိုင်ငံ ရေးအခြေအနေအစီရင်ခံစာအပေါ်ဆွေးနွေးတာ၊ စာအုပ်အနေနဲ့ထုတ်ထားတဲ့ ပါတီ မူဝါဒလမ်းစဉ်နဲ့ပတ် သတ်လို့ ထပ်ဆင့်အတည်ပြုတာ၊ နောက်ပါတီဖွဲ့စည်းပုံစည်းမျဉ်းနဲ့ပတ်သတ်လို့ ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်တာတွေ လုပ်တာနဲ့ ပါတီလုပ်ငန်းလမ်းညွှန်ပိုင်းရေးဆွဲထားတာတွေကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒုတိယနေ့မှာတော့ ပထမနေ့ထပ်မံပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်တဲ့ ပါတီ မူဝါဒပိုင်း ရပ်တည်ချက်ပိုင်းတွေ ကို အတည်ပြုသွားဖို့ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။
စဈမှနျတဲ့ ဖကျဒရယျ နဲ့ ကိုယျပိုငျပွဌာနျးခှငျ့ကို SNLD ဆကျလကျဆုပျကိုငျသှားမညျ
ရှမျးတိုငျးရငျးသားမြား ဒီမိုကရစေီအဖှဲ့ခြုပျ (SNLD)အနနေဲ့ ဖှဲ့စညျးပုံပွငျဆငျရေး ကိုယျပိုငျပွဌာနျးခှငျ့စတဲ့ ပါတီမူဝါဒပွောငျးလဲဖို့မရှိသလို၊ စဈကောငျစီက ကငျြးပမယျဆိုတဲ့ ရှေးကောကျပှဲနဲ့ ပတျသကျလို့လညျး သဘောထားဘာမှမရှိသေးဘူးလို့ SNLD ပွောခှငျ့ရသူက ဆိုပါတယျ။
မလေ ၂၆ရကျကစတဲ့ ပါတီညီလာခံမှာတော့ လကျရှိနိုငျငံရေး အခငျးအကငျြး သုံးသပျခကျြ ဆှေးနှေးခဲ့ကွတယျလို့ သိရပါတယျ။ ရနျကုနျကနေ ပေးပို့တဲ့ သတငျးကို ဒျေါခငျမြိုးသကျက ပွောပွပေးမှာပါ။
တိုငျးရငျးသားပါတီတှထေဲမှာ အငျအားအကွီးဆုံးပါတီတခုလို့ဆိုနိုငျတဲ့ ရှမျးတိုငျးရငျးသား မြားဒီမိုကရစေီ အဖှဲ့ခြုပျရဲ့ နိုငျငံလုံးဆိုငျရာ ညီလာခံကို မလေ ၂၆-၂၇ နှဈရကျကငျြးပသှားဖို့ ပွငျဆငျထားတာပါ။ စဈတပျက အာဏာသိမျးထားတဲ့ လကျရှိ မွနျမာ့နိုငျငံရေး အခငျးအကငျြးပျေါမူ တညျပွီး ပါတီမူဝါဒ ပွောငျးလဲဖို့မရှိဘူးလို့ ပါတီရဲ့ တှဲဖကျအထှထှေအေတှငျးရေးမှုး ၁ စိုငျးကြျောညှနျ့က ဗှီအိုအကေိုပွော ပါတယျ။
" လကျရှိနိုငျငံရေး အခငျးအကငျြးနဲ့ ပတျသတျရငျတော့ ကနြျောတို့က လကျရှိနိုငျငံရေး အခငျးအကငျြးမှ ရယျမဟုတျပါဘူး။ ကနြျောတို့ပါတီက ဘယျအခနျးကဏ်ဍမှာ ဘယျလိုရပျတညျမလဲဆိုတာ ဘယျလိုမူဝါဒရှိတယျဆိုတာ ပွညျ့ပွညျ့စုံစုံ ရေးသားပွီးသားဖွဈပါတယျ။ ဆိုတော့ကနြျောတို့ပွောခဲ့တဲ့ မူဝါဒ အခွခေံတဲ့ပါတီဖွဈအောငျ ကနြျောတို့ကွိူးစားနတောဖွဈတယျ။ အဲဒီတိုငျးဘဲရပျတညျသှားမှာဖွဈပါတယျ။ ကနြျောတို့က ခေါငျးဆောငျတယောကျက တမြိုးပွော နောကျတယောကျကတမြိုးပွော ဆိုတာမြိုး ကနြျောတို့ပါတီမှာမရှိပါဘူး။ ကနြျောတို့မွငျခငျြတဲ့ ဒီနိုငျငံပုံစံ mission ပေါ့ ။ ဒီတိုငျးပွညျကို ဘယျလိုတညျဆောကျမယျဆိုတာ ကနြျောတို့ ပွညျ့ပွညျ့စုံစုံ ပါတီမူဝါဒ လမျးစဉျမှာ ရေးထားပွီးသား ဖွဈပါတယျ။ အပွောငျးအလဲဖွဈတာ ဒီနိုငျငံရဲ့ အခငျးအကငျြးပွောငျးတာဖွဈတယျ။ ဟိုတုနျးကလညျးဒီတိုငျးဘဲ ခုလဲဒီတိုငျးဘဲဆကျလကျတိုကျပှဲဝငျမယျ"
စဈတပျက အာဏာသိမျးထားတဲ့ လကျရှိ မွနျမာ့နိုငျငံရေးပိုငျးမှာ တညျဆဲပါတီတှမှော ပါတီလှုပျရှား မှုတှအေတှကျ ခြုပျခယျြကနျ့သတျခံနရေတာတှေ ရှိနသေလို၊ စဈကောငျစီခနျ့ UEC ဘကျကလညျး မလိုလားအပျတာတှေ မဖွဈရအောငျဆိုတဲ့ အကွောငျးပွခကျြနဲ့ ပါတီတှရေဲ့လှုပျရှားမှုတှကေို ကနျ့သတျနိုငျဖို့ ကွိုးစားနတေယျလို့ ပါတီ တခြို့က ထောကျပွတာတှရှေိနပေါတယျ။ ဒီလိုအခွအေနကွေားမှာပဲ SNLD ပါတီညီလာခံကို လုပျခဲ့ကွတာပါ။
လကျရှိ မွနျမာ့နိုငျငံရေး အခငျးအကငျြးမှာ စဈတပျဘကျက လာမယျ့နှဈ ရှေးကောကျပှဲ ပွနျလညျကငျြးပပေးဖို့ ပွငျဆငျနတောတှရှေိနပေါတယျ။ ပွီးခဲ့တဲ့ရှေးကောကျပှဲမှာ အနိုငျရခဲ့တဲ့ NLD အမြိုးသား ဒီမိုကရစေီအဖှဲ့ခြုပျအနနေဲ့ ပါတီခေါငျးဆောငျ အားလုံးနီးပါး ဖမျးဆီးခံနရေတဲ့အခြိနျမှာ၊ ပါတီတခြို့က ဒီရှေးကောကျပှဲကို လကျခံပါဝငျ သဘောရှိနပေါတယျ။ NLD ပါတီနဲ့ မဟာမိတျဖွဈခဲ့တဲ့ SNLD ရှမျးတိုငျးရငျးသားမြား ဒီမိုကရစေီအဖှဲ့ခြုပျအနနေဲ့ လာမယျ့ ရှေးကောကျပှဲ ဘယျလိုသဘောထားမလဲဆိုတာကို အမြားစုစိတျဝငျစားပါတယျ။ စိုငျးကြျောညှနျ့က အခုလို တုံပွနျပါတယျ။
" ရှေးကောကျပှဲကိစ်စကတော့ CEC တှဘကျက သဘောထားတခုရှိတယျ ၂၀၂၂ ကုနျထိ ရှေးကောကျပှဲအကွောငျးကိုမဆှေးနှေးပါဘူး။ အဲဒါကပွောငျးစရာမရှိသေးပါဘူး "
ပါတီ စာရငျးမြား အစဈဆေးခံဖို့ စဈကောငျစီခနျ့ ပွညျထောငျစုရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျ (UEC)က ပါတီတှကေို ညှနျကွားတာခဲ့တာမှာ လကျမခဲ့တဲ့ ပါတီတှထေဲမှာ SNLD ပါတီပါဝငျပါတယျ။ လကျရှိမှာ UEC ဘကျက SNLD ဘကျက အစဈဆေးခံဖို့ ရကျသတျမှတျခကျြကို ဇှနျလကုနျထိ တိုးမွငျ့ပေး ထားပမေယျ့ ပါတီ ရပျတညျခကျြက အရငျအတိုငျးမပွောငျးမလဲ ရှိတယျလို့ စိုငျးကြျောညှနျ့ကပွောပါတယျ။
" ဒီညီလာခံမှာဆှေးနှေးဖွဈမယျမထငျဘူး။. ဘာလို့ဆို UEC ကကနြျောတို့ကိုစာတစောငျပို့ထားတာရှိတယျ။ စဈဆေးမယျ့ရကျနောကျဆုံးရကျကို ဇှနျ ၃၀ ထိပေးထားတယျဆိုတာပို့ထားပါတယျ။ အားလုံးလဲသိပွီးသား ကနြျောတို့ကစဈဆေးမခံတာမဟုတျဘူးစဈခငျြရငျပါတီဌာနခြူပျရုံး ရနျကုနျကိုးမိုငျမှာရှိတယျ အဲကိုလာခဲ့လိုကျပါ။ အဲဒါကလကျရှိထိအပွောငျးအလဲမရှိဘူး ညီလာခံမှာလညျးအကယျြတဝငျ့ဆှေးနှေးဖွဈ မှာမဟုတျပါဘူး"
၂ရကျတာကငျြးပမယျ့ ပါတီညီလာခံ ပထမနမှေ့ာ ပါတီ CEC တှသေုံးသပျတငျပွထားတဲ့ လကျရှိနိုငျငံ ရေးအခွအေနအေစီရငျခံစာအပျေါဆှေးနှေးတာ၊ စာအုပျအနနေဲ့ထုတျထားတဲ့ ပါတီ မူဝါဒလမျးစဉျနဲ့ပတျ သတျလို့ ထပျဆငျ့အတညျပွုတာ၊ နောကျပါတီဖှဲ့စညျးပုံစညျးမဉျြးနဲ့ပတျသတျလို့ ပွငျဆငျဖွညျ့စှကျတာတှေ လုပျတာနဲ့ ပါတီလုပျငနျးလမျးညှနျပိုငျးရေးဆှဲထားတာတှကေို ဆှေးနှေးခဲ့ကွတယျလို့ သိရပါတယျ။ ဒုတိယနမှေ့ာတော့ ပထမနထေ့ပျမံပွငျဆငျမှုတှလေုပျတဲ့ ပါတီ မူဝါဒပိုငျး ရပျတညျခကျြပိုငျးတှေ ကို အတညျပွုသှားဖို့ရှိတယျလို့ သိရပါတယျ။
NLD နဲ့ SNLD ပါတီတွေကို အရေးယူမယ်လို့ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ပြောဆို